Dheuteronomi 22 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kubata zvakanaka zvipfuwo zvemuvakidzani (1-4)
Kupfeka zvipfeko zvechirume uri mukadzi kana kuti zvechikadzi uri murume (5)
Kubata mhuka zvakanaka (6, 7)
Kuisa kamudhuri pamusoro pedenga remba (8)
Kusanganisa zvinhu kusingabvumirwi (9-11)
Masa pazvipfeko (12)
Mitemo pamusoro peumhandara, unzenza, uye kubata chibharo (13-30)
22 “Kana ukaona mombe yehama yako kana kuti gwai rake zvichirasika, haufaniri kungozvisiya.+ Unofanira kuzvidzorera kuhama yako. 2 Asi kana hama yako isingagari pedyo newe kana kuti usingaizivi, unofanira kuenda nechipfuwo chacho kumba kwako, uye ucharamba uinacho kusvikira hama yako yachitsvaga, wobva waidzosera.+ 3 Ndizvo zvaunofanira kuitawo nedhongi rake, nechipfeko chake, uye nechinhu chese chehama yako chinenge charasika chaunenge wawana. Haufaniri kungochisiya. 4 “Kana ukaona dhongi rehama yako kana kuti mombe yake zvakawira pasi mumugwagwa, haufaniri kungozvisiya. Unofanira kumubatsira kumutsa chipfuwo chacho.+ 5 “Mukadzi haafaniri kupfeka chipfeko chechirume, uye murume haafaniri kupfeka chipfeko chechikadzi. Nekuti munhu wese anoita izvi anosemesa Jehovha Mwari wako. 6 “Kana ukaona dendere reshiri uri mumugwagwa riine manyana kana mazai, ringava riri mumuti kana pasi, uye amai vacho vakavhumbamira manyana acho kana mazai, haufaniri kutora amai vacho pamwe nemanyana acho.+ 7 Unofanira kurega amai vacho vachienda, asi unogona hako kutora manyana acho. Ita izvi kuti zvikufambire zvakanaka uye urarame kwenguva refu. 8 “Kana ukavaka imba, unofanira kuvaka kamudhuri kanopoteredza denga racho,+ kuti urege kuisa mhosva yekudeura ropa paimba yako mumwe munhu adonha achibva pairi. 9 “Usadyara mbeu dzemarudzi maviri mumunda wako wemizambiringa.+ Kana ukadaro, zvibereko zvese zvembeu yaunenge wadyara nezvese zvichabva pamazambiringa acho zvichatorwa zvoendeswa kunzvimbo tsvene. 10 “Usarima nemombe nedhongi zviri pamwe chete.+ 11 “Usapfeka zvipfeko zvakarukwa zvichisanganiswa shinda yemvere dzemakwai neshinda yejira.+ 12 “Unofanira kusunga mapfundo pamasa* ezvipfeko zvako pamakona acho mana.+ 13 “Kana murume akatora mudzimai, akarara naye, asi ozomuvenga,* 14 uye omupomera kuti akanga asingazvibati uye osvibisa zita rake achiti: ‘Ndakatora mukadzi uyu, asi pandakarara naye handina kuona zvairatidza kuti akanga ari mhandara,’ 15 baba naamai vemusikana wacho vanofanira kubudisa uchapupu hunoratidza kuti mwanasikana wavo akanga ari mhandara, voratidza vakuru vanenge vari pagedhi reguta. 16 Baba vemusikana wacho vanofanira kuudza vakuru kuti, ‘Ndakapa murume uyu mwanasikana wangu kuti ave mudzimai wake, asi ava kumuvenga* 17 uye ari kumupomera kuti akanga asingazvibati achiti: “Ndakawana mwanasikana wenyu asiri mhandara.” Saka uhwu ndihwo uchapupu hwekuti mwanasikana wangu yaiva mhandara.’ Vachabva vatambanudza jira racho pamberi pevakuru veguta. 18 Vakuru veguta+ vachatora murume wacho vomuranga.+ 19 Vachamuripisa mashekeri* esirivha 100 voapa baba vemusikana wacho, nekuti murume wacho akasvibisa zita remhandara yaIsraeri,+ uye acharamba ari mudzimai wake. Haazobvumirwi kumuramba kweupenyu hwake hwese. 20 “Asi kana zvaari kupomerwa zviri zvechokwadi, uye pasina uchapupu hunoratidza kuti musikana wacho aiva mhandara, 21 vanofanira kuuya nemusikana wacho pasuo reimba yababa vake, uye varume veguta rake vanofanira kumutema nematombo kusvikira afa, nekuti akaita zvinhu zvinonyadzisa+ muIsraeri nekuita unzenza*+ muimba yababa vake. Saka unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako.+ 22 “Kana murume akawanikidzwa akarara nemukadzi wemunhu, vese vanofanira kuurayiwa, murume wacho pamwe nemukadzi wacho waakarara naye.+ Saka unofanira kubvisa zvakaipa pakati paIsraeri. 23 “Kana paine mhandara yakavimbiswa kuroorwa nemurume, uye zvikaitika kuti mumwe murume anosangana nayo muguta, orara nayo, 24 munofanira kuvabudisa vese kunze kwegedhi reguta iroro movatema nematombo kusvikira vafa, musikana wacho nekuti haana kuridza mhere muguta uye murume wacho nekuti akanyadzisa mudzimai wemumwe wake.+ Saka unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako. 25 “Asi kana zvikaitika kuti murume anosangana nemusikana akavimbiswa kuroorwa ari kusango, uye murume wacho omukunda simba, orara naye, murume akarara naye anofanira kuurayiwa ega, 26 uye musikana wacho hapana zvaunofanira kumuita. Musikana haana chivi chaakaita chakakodzera rufu. Izvi zvakafanana nezvinoitika kana murume akarwisa mumwe wake omuponda.+ 27 Nekuti akasangana naye ari kusango uye musikana wacho akavimbiswa kuroorwa akaridza mhere, asi pakashayikwa anomununura. 28 “Kana zvikaitika kuti murume anosangana nemhandara isina kuvimbiswa kuroorwa, akaibata, akarara nayo, uye vakawanikidzwa,+ 29 murume anenge arara naye anofanira kupa baba vemusikana wacho mashekeri esirivha 50, uye achava mudzimai wake.+ Sezvo akamunyadzisa, haazobvumirwi kumuramba kweupenyu hwake hwese. 30 “Hapana murume anofanira kutora mudzimai wababa vake, nekuti akadaro anenge azvidza baba vake.*+
^ Kana kuti “ozomuramba.”
^ Kana kuti “kumuramba.”
^ Kana kuti “upfambi.”